Is-barbardhig: Awoodaha milateri ee Itoobiya iyo Masar - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Is-barbardhig: Awoodaha milateri ee Itoobiya iyo Masar
19 Maarso 2020
Lahaanshaha sawirka EGYPT TV/All Africa
Khilaafka u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo-xireenka weyn ee ay xukuumadda Addis Ababa ka dhisayo webiga Blue Nile ayaa maalmihii dambe sii xoogeystay.
Itoobiya ayaa 26-kii February si ku meel gaar ah u hakisay ka qeyb galka wadahadallo uu Maraykanka garwadeen ka ahaa oo ku aaddanaa buuxinta iyo maamulka biya-xireenkaasi, waxaana ay codsatay in muddo dheeraad ah la siiyo si ay uga soo tashato heshiiska hordhaca ah.
Iyadoo boqolkiiba toddobaatan(70百分比) la dhammeystiray dhismaha biyo-xireenka ayaa waxaa la filayaa in bisha July la billaabo buuxintiisa, waxaana aad usii yaraanaya waqtiga lagu dhammeystiri karo wadahadallada.
Itoobiya ayaa u aragta in Mareykanka aanu dhexdhexaad ka ahayn wadaxaajoodka, uuna la safan yahay dalka Masar, sida ay sheegtay jariiradda Foreign Policy.
Lahaanshaha sawirka EGYPT TV
Addis Ababa ayaa dhowr jeer ku gooddisay inay difaacan doonto biyo-xireenka ayna xaq u leedahay ka faa'iideysiga biyaha webiga.
Arrintan ayaa timid kaddib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo-xireenka aanan la dhammeystiri karin ilaa iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo.
Haseyeeshee, dowladda Masar ayaa ku doodeysa in haddii Itoobiya ay dhammeystirto biyaxireenkaasi uu saameyn ku yeelan karo biyaha ay masar ka hesho webiga.
Shabakadda The global fire power oo inta badan wax ka qorta awoodaha milateri ee dalalka caalamka ayaa warbixin ay soo saartay sanadkan 2020 ku sheegtay in milateriga Masar uu yahay kan 9-aad ee ugu awoodda badan dunida, halka milateriga dalka Itoobiyana uu yahay kan 60-aad ee ugu awoodda badan dunida.
Lahaanshaha sawirka CN
Lahaanshaha sawirka Egypt Daily
Ciidanka badda ee Masar ayaa heysta laba markab oo ah kuwa qaada diyaarada, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo heysta.
Awoodda milateri ee Itoobiya
Lahaanshaha sawirka All Africa
Itoobiya oo kamid ah dalalka geeska Afrika ugu awoodda badan ayaa tirada dadka ku nool waddankaas waxa ay gaarayaan 108 milyan oo ruux.
Milateriga dalka Itoobiya ayaa GFP uu kusoo wariyay in uu heysto 400 oo taangiyada dagaalka ah, 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 67 gantaallada dhulka lagu rakibo ee artilariga loo yaqaanno iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya.
Diyaaradda dagaalka ee Itoobiya ayaa lagu qiyaasay 24 diyaarad oo ah kuwa miigga loo yaqaanno, 9 diyaarad oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaarad oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helikobtarka iyo 8 noocyadaas ah oo ah kuwa wax duqeeya.
Lahaanshaha sawirka Fana broadcasting
Itoobiya ma lahan wax ciidan bad ah, maadaama aysan lahayn bad.
Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore kusoo warramay in dowladda Faraniiska ay Itoobiya ka caawineyso dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sannadkii 1991-kii, ka dib markii Eritrea ay ka madaxbanaanaatay Itoobiya, halkaas oo saladhig u ahayd ciidanka badda ee Itoobiya.
Inkastoo Dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u shaacinin halka uu noqonayo saldhigga ciidamadooda badda, haddana sannadihii la soo dhaafay waxaa jiray warar sheegayay in saldhig looga dhigi doono dalalka Eritrea, Jabouti ama Sudan, iyadoo dadka qaarna ay hadal hayeen Soomaaliya.
Wargeyska oo soo xiganaya ilo dowladda ah ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhigga ciidanka badda laga dhiso dalka Jabuuti.
Lahaanshaha sawirka ETV
Sida uu wargeyskaas qoray arrintan waxaa lagaga hadlay kulankii ugu dambeeyay ee uu Abiy Axmed ku tagay dalka Jabuuti, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Hasayeeshee, wararkaas waxaa beeniyay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idiris Faarax, oo yiri: "Warkaas waa war jaraa'iddada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidanka badda ee Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti, warkaasi ma ahan war rasmi ah," ayuu yiri.
Maxamed Idiris Faarax ayaa intaas ku daray: "Ma heyno wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen, haddii ay noqoto in heshiis la gaarana wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhexmara Faransiiska, jabuuti iyo Itoobiya".